Otu Lufthansa na-akwụghachi ego ejiri n'aka gọọmentị German
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Otu Lufthansa na-akwụghachi ego ejiri n'aka gọọmentị German
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Otu Lufthansa na-akwụghachi ego ejiri n'aka gọọmentị German.
N'ụtụtụ a, a kwụghachiri Silent Participation II nke Economic Stabilization Fund nke Federal Republic of Germany (ESF) nke ruru ijeri euro 1.
Binye ego German niile na nsonye dị jụụ, gụnyere ọmụrụ nwa, akwụghachila otu n'otu.
N'okpuru ọnọdụ a, ESF agbaala mbọ ire ere ya na Deutsche Lufthansa AG ruru ihe ruru. Pasent 14 nke isi obodo ka ọ na-erule Ọktoba 2023 kacha ọhụrụ.
Ngwunye gọọmentị German na mbụ nyere usoro na mgbazinye ego ruru ijeri euro 9, nke ụlọ ọrụ ahụ weputara mkpokọta ihe ruru ijeri euro 3.8.
Na Fraịde, Deutsche Lufthansa AG kwụghachiri ma ọ bụ kagbuo ego nkwado gọọmentị fọdụrụ na Federal Republic of Germany. Emere nkwụghachi ahụ n'oge karịa ka echere na mbụ. Emere nke a nke ọma site n'ịchọ njem ụgbọ elu na-arị elu, nhazigharị ngwa ngwa na mgbanwe nke otu Lufthansa Group na ntụkwasị obi nke isi obodo nwere na ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a pụtara na ụtụtụ a, Silent Participation II nke Economic Stabilization Fund nke Federal Republic of Germany (ESF) nke ruru ijeri euro 1 ka akwụghachiri n'uju. Mgbe ụlọ ọrụ ahụ akwụghachilarị nsonye Silent I n'ọnwa Ọktọba, nke naanị ijeri euro 1.5 ka ewepụtara, akụkụ nke ejighi ya na nke fọdụrụ ugbu a akwụsịla. Febụwarị gara aga, ụlọ ọrụ ahụ akwụghachilarị mbinye ego KfW nke ijeri euro 1 tupu oge a tụrụ anya ya. Nke a pụtara na mbinye ego German niile na nsonye dị jụụ, gụnyere ọmụrụ nwa, akwụghachila n'otu n'otu. N'okpuru ọnọdụ a, ESF agbaala mbọ ire ere ya Deutsche Lufthansa AG ruru ihe ruru. Pasent 14 nke isi obodo ka ọ na-erule Ọktoba 2023 kacha ọhụrụ.
Carsten Spohr, onye isi oche nke Deutsche Lufthansa AG kwuru, sị:
"N'aha ndị ọrụ Lufthansa niile, ọ ga-amasị m ikele gọọmentị German na ndị na-atụ ụtụ German. N'ime nsogbu ego kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ anyị, ha enyela anyị echiche maka ọdịnihu. Nke a enyerela anyị aka ichekwa ihe karịrị ọrụ 100,000. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike imezu nkwa anyị tupu oge a tụrụ anya ma kwụọ ụgwọ enyemaka ego German. Ọ ga-amasị m ikele ndị ọrụ anyị maka nnukwu nkwa ha na karịsịa ndị ahịa anyị bụ ndị nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye anyị n'oge ndị a siri ike. Lufthansa nwere ike ịdabere na Germany na Germany nwere ike ịdabere na ya Lufthansa. Ọtụtụ ihe ịma aka ka dị. Ebumnobi anyị bụ ime ka ọnọdụ anyị sie ike n'etiti ndị otu ụgbọ elu ụwa. Iji mezuo nke a, anyị ga-anọgide na-aga n'ihu na nhazigharị na mgbanwe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Remco Steenbergen, CFO nke Deutsche Lufthansa AG, kwuru, sị:
"Karịa ihe niile, ọ ga-amasị m ikele ndị na-etinye ego anyị maka ntụkwasị obi ha nwere na ụlọ ọrụ anyị. Na-enweghị ha, ọpụpụ ngwa ngwa dị otú ahụ site na nsonye Silent agaraghị enwe ike. Ntụkwasị obi a bụ ọrụ dịịrị anyị ịnọgide na-aga n'ihu n'ụzọ anyị sirila hazigharịa ma gbanwee otu. Anyị kpebisiri ike ime ka akwụkwọ nguzozi anyị sikwuo ike, bawanye uru anyị na iwepụta nkwụghachi isi ego mara mma. Ebumnuche ego anyị bipụtara na June gosipụtara nke a nke ọma. Anyị kwenyesiri ike na anyị ga-emepụta uru na-adigide maka ndị na-eketa òkè anyị. "
Na June 2020, ndị na-eketa òkè nke Deutsche Lufthansa AG kpochapụrụ ụzọ maka usoro nkwụsi ike nke Economic Stabilization Fund (ESF) nke Federal Republic of Germany. Ngwunye gọọmentị German na mbụ nyere usoro na mgbazinye ego ruru ijeri euro 9, nke ụlọ ọrụ ahụ weputara mkpokọta ihe ruru ijeri euro 3.8. Nke a gụnyere ihe dị ka nde euro 306 nke ESF ji wulite oke ya na Deutsche Lufthansa AG.
Iji refinance ẹdude ụgwọ na ọchịchị Stabilization ngwugwu, ụlọ ọrụ ewerewo dị iche iche ụgwọ na nha anya ego jikoro kemgbe mgbụsị akwụkwọ 2020. N'ime otú ahụ, ọ na-erite uru site nwayọọ nwayọọ na-eto eto obi ike nke ego ahịa n'ọdịnihu atụmanya nke ọdịnihu. Lutù Lufthansa.
Na Nọvemba 2020, ụlọ ọrụ ahụ mere “nlaghachi” n'ahịa isi obodo yana njikọ na-agbanwe agbanwe yana mkpokọta nde euro 600 yana njikọ ụlọ ọrụ nke ijeri euro 1. Na Febụwarị 2021, Deutsche Lufthansa AG weputara nke ọma nke ọma maka ijeri euro 1.6. Ndobe nkekọ ọzọ sochiri na Julaị 2021 na ọnụọgụ ijeri euro 1. N'October 2021, ụlọ ọrụ ahụ mezuru mmụba ego nke ọma. Ọnụ ego e nwetara site na mmụba nke isi obodo ahụ ruru ijeri euro 2.2. N'ikpeazụ, na 9 Nọvemba 2021, ndị Lutù Lufthansa ọzọ na-arụsi ọrụ ike nke ọma na ahịa ego ma nye njikọ na ego nke 1.5 ijeri euro.